DFS oo sheegtay in saraakiil iyo dagaalameyaal ka tirsan Al-shabaab lagu dilay weerar ka dhacay G/Sh/Dhexe. | Allgalgaduud.Com
Home Dhacdooyinka Todobaadka DFS oo sheegtay in saraakiil iyo dagaalameyaal ka tirsan Al-shabaab lagu dilay...
DFS oo sheegtay in saraakiil iyo dagaalameyaal ka tirsan Al-shabaab lagu dilay weerar ka dhacay G/Sh/Dhexe.
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar ay Ciidamada xoogga dalka ku qaadeen degaanka Warta-Jilable, ee gobolka shabeelaha dhexe, halkaasi oo ay ku sugnaayeen saraakiil iyo dagaalameyaal ka tirsan Al-Shabaab.
Afhayeenka ciidanka xoogga dalka Gaashaanle Sare Cali Xaashi oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in weerarkii ka dhacay deegaanka Warta-Jilable lagu dilay 70 saraakiil iyo dagaalameyaal ka tirsan kooxda Al-shabaab, isagoona sheegay in tiro intaa ka badana ay ku dhaawaceen weerarka.
Wararkii ugu dambeeyay laga helayo deegaanka ayaa sheegaya in weli Howlgalka uu ka socda degaankaasi gobolka Shabeelaha dhexe.